“प्राय महिलाहरुको योनी किन अत्यन्त चिलाईरहन्छ? उपचार कसरी गर्ने? (डा. मालाजीसंग भिडियो सहित)” – Krazy NepaL
“प्राय महिलाहरुको योनी किन अत्यन्त चिलाईरहन्छ? उपचार कसरी गर्ने? (डा. मालाजीसंग भिडियो सहित)”
November 10, 2020 1570
“”डाक्टर माला श्रेष्ठ जि! नमस्कार!””
मेरो यो’नी अत्यन्त किन चिलाई रहन्छ? उपचार कसरी गर्ने? (भिडियो सहित)
स्त्री त’था प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्ट’र माला श्रेष्ठ
प्रायः जसो महिलामा यो’नी चि”लाउने समस्या हुन्छ। तर हा’म्रो समाज’मा अझै पनि यो’नी चि’लाउने समस्याला’ई सह’जै बाहिर ल्याएको पाइँदैन । यौ-नी चिलाउने कारण र यसको समाधान कसरी गर्ने?”
समा’जमा अझै पनि यो’नां’गमा देखा पर्ने स’मस्यालाई सहजै बा’हिर ल्याइँदैन। यौ-नां-गमा देखिएका सम’स्या भन्दा उत्ता’उ”लो लगायतका उपनाम दिई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रथा अझै पनि काय मै छ।
जसको परिणाम स्वरुप यो-नां’गमा देखिएका समस्याले अन्य अंगमा पनि असर ग’र्ने अवस्था आउँछ। यौ’नां’गमा देखिने समस्यामध्ये यो’नी चि’लाउने समस्याले धेरैलाई पी’डा दिएको छ।”
योनी चिलाउने प्रमुख कारण:
स्टोजन ह’र्मोनको क’मी। योनी फोहो’र राख्नु। धेरै व्यक्ति’सँग यौन सम्पर्क राख्नु। विशेष’ गरेर महिना’वारीको समय’मा प्रयोग गरिने प्याड त’था कपडा लामो समय राखिराख्नु , योनी सफा नगर्नु। ‘नुहाँउदा योनीलाई अस’र पुर्याउने सा’वुन वा सेम्पो प्रयोग गर्नु। यो”नी प्राय जसो पहिलो पटक महिनावारी हुने उमेरका किशोरी तथा महिनावारी सुकेका महिला’लाई बढी चिलाउँछ। यसको मूख्य कारण भनेकै स्ट्रोजन हर्मोनको कमी हुनु हो।”’
‘योनी सधै सफा राख्ने। भित्र लगाउने कपडा प्रत्येक दिन परिवर्तन गर्ने। र’जस्व’ला हुँदा ३/३ घण्टामा ‘प्या’ड वा कपडा परिवर्तन गर्ने। ‘नुहाउँदा योनांगमा मात्र प्रयोग गर्ने स्याम्पो ‘प्रयोग गर्ने। धेरैलाई थाहा’ नहुन सक्छ योनांगमा’ आवश्यक पर्ने केही किटाणु हुन्छन्।
“”योनी चिलाउने समस्या भएकाहरुले अपनाउनु पर्ने घरेलु उपाय””
महिलाहरु आफ्नो जीवनमा चिलाउने समस्याबाट गुज्रिएका हुन्छन्। कहिलेकाँहि यसो हुनु सामान्य भएपनि लामो समयसम्म चि’लाइराख्नु वा बारम्बार चि’लाइराख्नु भने राम्रो होइन।
यो’नि चिलाउने समस्या धेरै कारणबाट हुन सक्छ। ती मध्ये प्रमुख कारण यो’नि राम्रोसँग सफा नगर्नाले यो सम’स्या उत्पन्न हुन जान्छ भने जथाभावि यौन सम्बन्धबाट हुने यौन रोगबाट पनि योनि चिलाउँछ।
योनी चिलाउनुको कारणहरु:
‘१)तनाव सुन्दा अचम्म लागेपनि यो सहि हो कि तनावको ‘कारणले गर्दा योनी चिलाउँछ।’
२) यिस्ट संक्रमण योनीमा यिस्ट इन्फेक्सनको कारणले पनि योनि चिलाउँछ। यिस्ट इन्फेक्सन हुँदा योनी वरिपरि सेतो दही जस्तो ढुसी जम्मा हुन थाल्दछ जसको कारण योनी चिलाउँछ।
३) सुख्खा छाला सुख्खा छाला भएको व्यक्तिमा पनि योनि चिलाउने समस्या बढी हुन्छ। छालालाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त पानीको अभावले गर्दा योनी वरिपरीको छाला सुख्खा हुन जान्छ र चिलाउन थाल्छ।
४)यौन संक्रमण धेरै जनासँग यौन सम्पर्क गर्नाले यौन रोग लाग्ने मात्रै नभइ’ योनी चिलाउने समस्या पनि शुरु हुन सक्छ। यी बाहेक योनीमा हुने संक्रमण, चोटपटक, महिनावरी बन्द हुनु आदि जस्ता कारणहरुले गर्दा पनि योनी चिलाउने समस्या हुन सक्छ।
के कारणले गर्दा योनि चिलाएको हो त्यो थाहा पर्दछ। यदि धेरै जनासँग’ यौन सम्पर्कले यस्त समस्या’ भएको हो भने सबैभन्दा पहिले त्यस्तो कार्य बन्द गर्नु पर्दछ।
२, कुनै रसायनिक पदार्थको प्रयोगबाट जस्तैः पर्फुमको प्रयोगले भो भने त्यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन।
बाथ टबमा नुहाउँदा भएको हो भने त्यसो गर्न छोड्नु राम्रो हुन्छ।
सुतिको पेन्टी मात्र प्रयोग’ गर्ने र चिलाइ निको ‘नभएसम्म राति सुत्दा पेन्टी नलगाउनु राम्रो हुन्छ।
-चिलाउन निको नभएसम्म यौनसम्पर्क ‘नराख्ने र राखी हाले कन्डमको प्रयोग गर्ने।
-योनि सुख्खा हुने समस्या छ भने ‘यौन सम्बन्ध राख्दा चिप्लो बनाउने चिल्लोको प्रयोग गर्ने।’
Prev२५०० मा १५ वर्षेको स्कूल कलेजका किशोरी छ्यापछयाप्ती (भिडियो)
NextIPL २०२० को उपाधी मुम्बई इन्डियन्सले जित्यो !